Muwaadiiin kirishtaan faransiis ah oo loo dilay difaaca Nabi Maxamad (CSW) dartii. – Shabakadda Amiirnuur
October 29, 2020 2:45 pm by admin Views: 48
Ugu yaraantii sadax faransiis kirishtaan ah ayaa dhintay afar kalena waa ay dhaawacmeen ka gadaal markii Maanta Nin dhalinyaro ah oo Muslim ah uu weerar ka fuliyay magaalada Nice ee Dalkaaas waxaana dhaawacmay afar kale.
Ninkaan oo ku dhawaaqaya Allaah akbar ayaa tooreyda ku weeraray dadkaan faransiiska ah xilli ay sii xoogeysaneyso carada Muslimiintu ka qaadeen Aflagaadada Faransiisku u geystay Nabi Muxamad (Csw) isl markaana ay dhaceen dibad baxyo ka dhan ah Faransiiska iyo wixii ku aragti ah ama ku mabda ah.
Dowladda faransiisku waxay ka cabsi qabtaa in ay dhacaan weeraro kale waxayna cadaadis saareysaa dadka Muslmiinta ah ee dalkeeda ku nool.
Dhawaan ayay ahayd Markii wiil shishaan ka soo jeeda Magaalada Paris ee Caasimadda Faransiiska ku gowracay Macalin Faransiisah oo Aflagaadey Jirey Nabigeena Muxamad (SCW) waaxanuu wiilkaasu Internerka soo geliyay sawir uu ka qaaday ninka uu dilay.
Wiilkaas ayaa aakhirkii shihiiday markii Ciidamada Faransiisku toogteen.
Dhanica kale Dowlado kala duwan ayaa Muujiyay mururgada uu ku reebay weerarka Maanta ak dhacay Magaalada Nice ee Faransiiska dhan ah.
Xukuumadda Farance ee Muwaadiiniinta laga dilay wuxuu sheegtay in ka xunuunsatay weerarka 3 ruux looga dilay 4 kalena looga dhaawacay.
Dowladda laba wejiileynta badan ee Turkiga oo awal sheegtay in ay ka soo horjeedo Tilaabada Faransiisku ku Aflgaadeynayo Nabi Muxamad (CSW) ayaa iminka waxay Cambaareysay ficilkaan Faransiiska looga aargutay.
Ra’iisalwasaaraha cunsiriga ah ee Inggiriiska Boris Johnson ayaa asiguna cambaareyeyay tilabadaan dulmi diidnimada ah waxaanuu sheegay in uu faransiiska garab taagan yahay.